Ch 25 Matiu – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Matiu / Ch 25 Matiu
25:1 "Mgbe ahụ, alaeze eluigwe ga-adị ka iri na-amaghị nwoke, onye, -ewere ha oriọna, we pua izute-alụ nwanyị ọhụrụ na ndị nwunye na-.
25:2 Ma ise n'ime ha dị nzuzu, ma ise nwere akọ na.
25:3 N'ihi na ise nzuzu, ọ me ka ha oriọna, ejighị mmanụ na ha.
25:4 Ma n'ezie, ndị dị akọ na ndị weta mmanụ, ha containers, na oriọna.
25:5 Ebe ọ bụ na nwoke na-alụ na-abịaghị n'oge, ha nile ede, na ha na-ehi ụra.
25:6 Ma na n'etiti abalị, a iti-nkpu we pua: Le, -alụ nwanyị ọhụrụ na-erute. Aga izute ya. '
25:7 Ndị niile na-amaghị nwoke biliri wee trimmed ha oriọna.
25:8 Ma ndị nzuzu we si ndi mara ihe, 'Nye anyị si gị mmanụ, n'ihi na anyị oriọna na-emenyụ ya emenyụ. '
25:9 Ndị dị akọ gwara ha, sị, 'Ghara ikekwe ọ gaghị ezuru anyị na unu, ọ ga-aka mma ka ị gaa mgbere na-azụ ihe dị onwe unu. '
25:10 Ma mgbe ha na-aga ịzụta ya, -alụ nwanyị ọhụrụ bịarutere. Na ndị na-akwado ya banyere ya agbamakwụkwọ, ma kwachie ụzọ ya emechi.
25:11 Ma n'ezie, na njedebe, ndị fọdụrụ amaghị nwoke bịakwara, si, 'Onyenwe anyị, Jehova, emeghe anyị. '
25:12 Ma ọ gwara ha, sị, 'Amen m asị unu, Amaghị m gị.'
25:13 Na otú ị ga-mụrụ anya, n'ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge awa.
25:14 N'ihi na ọ bụ dị ka onye ebili ka ije dị anya, onye a na-akpọ ndi-orù ma nyefee ha ihe ndị o ngwongwo.
25:15 Na O nyere otu onye talent ise, na onye nke ọzọ abụọ, ma ọzọ o nyere otu, ka onye ọ bụla dị ka ike ya hà. na ngwa ngwa, ọ malitere.
25:16 Mgbe ahụ, ọ natara talent ise we pua, na o mere ihe ndị a, o nweela ọzọ ise.
25:17 Na N'otu aka ahụ, ọ natara abụọ nweela ọzọ abụọ.
25:18 Ma onye natara otu, -aga, gwuru n'ime ụwa, o zoro ego nke onye-nwe-.
25:19 Ma n'ezie, mgbe ogologo oge, ka onye-nwe ndi-orù laghachite, o wee mpịazi ha.
25:20 Na mgbe ọ natara talent ise bịakwutere, o we me ihe ọzọ talent ise, si: 'Onyenwe anyị, ị rara talent ise m. Le, M ụba ya ọzọ ise. '
25:21 -Nwe-ya we si ya: 'Ị mere nke ọma, ezi ihe na-ekwesị ntụkwasị obi na ohu. Ebe ọ bụ na ị nọwo na-ekwesị ntụkwasị obi n'elu ihe ole na ole, M ga-eme gị-elekọta ọtụtụ ihe. -Aba ọṅù onyenwe gị. '
25:22 Mgbe ahụ, ọ natara talent abụọ nwekwara bịakwutere, o wee sị: 'Onyenwe anyị, ị rara talent abụọ m. Le, M enweta ọzọ abụọ. '
25:23 -Nwe-ya we si ya: 'Ị mere nke ọma, ezi ihe na-ekwesị ntụkwasị obi na ohu. Ebe ọ bụ na ị nọwo na-ekwesị ntụkwasị obi n'elu ihe ole na ole, M ga-eme gị-elekọta ọtụtụ ihe. -Aba ọṅù onyenwe gị. '
25:24 Mgbe ahụ, ọ natara otu talent, -eru nso, kwuru: 'Onyenwe anyị, M maara na ị bụ onye aka ike. Ga-aghọrọ mkpụrụ n'ebe ị ghara, na-akpọkọta ebe ị gbasasịa.
25:25 Ya mere, ịtụ egwu, M wee zoo talent gị n'ala. Le, i nwere ihe gị. '
25:26 Ma onyenwe ya wee sị ya ná nzaghachi: 'Ị ọjọọ na umengwụ orù! Ị maara na m ubi ebe m na-akụ, na-akpọkọta ebe m na-agbasasịkwa.
25:27 Ya mere, ị kwesịrị edebe m ego na bankers, Ọzọkwa, na m rutere, ọ dịghị ihe ọzọ m ga-natara ihe m ji mmasị.
25:28 Ya mere, na-talent n'ebe ọ nọ pụọ na-enye ya na onye ahụ ihe talent iri.
25:29 N'ihi na onye ọ bula nke nwere, ihe ga-nyere, ọ ga-enwe n'ụba. Ma onye nwere abụghị, ọbuná ihe ọ yiri ka è nwere, ga-anapụ.
25:30 Tubà na-abaghị uru orù n'ọchịchịrị dị n'èzí, ebe a ga-akwa ákwá ma taa ikikere ezé. '
25:33 And he shall station the sheep, n'ezie, nri-ya na, but the goats on his left.
25:34 Then the King shall say to those who will be on his right: 'Bịanụ, you blessed of my Father. Possess the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
25:37 Then the just will answer him, si: 'Onyenwe anyị, when have we see you hungry, and fed you; thirsty, and given you drink?
25:40 Na na nzaghachi, the King shall say to them, 'Amen m asị unu, whenever you did this for one of these, the least of my brothers, you did it for me.’
25:44 Then they will also answer him, si: 'Onyenwe anyị, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?'
25:45 Then he shall respond to them by saying: 'Amen m asị unu, whenever you did not do it to one of these least, neither did you do it to me.’